Nilaza Ny Hetsi-panoherana Rosiana Fa Mitohy ny Tolona, na dia eo aza ny Fandraràna Federaly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Avrily 2017 13:48 GMT
Maria Baronova (ankavia), Mikhail Khodorkovsky (farany ankavanana), sy ny ekipan'i Rosia Misokatra. Sary: Maria Baronova / Instagram
Na dia noraràn'ny mpampanoa lalàna androany aza, nilaza ny hetsi-panoherana “Rosia Misokatra” fa hanohy ny hetsika rehetra, anisan'izany ny drafitra fihetsiketsehana manohitra an'i Potinina manerana ny firenena amin'ny Asabotsy. Nanoratra tao amin'ny Twitter i Mikhail Khodorkovsky, mpanorina ny hetsika fa “mirehareha” mahita ny zanany mifampitady amin'ny governemanta.
Raha ny marina, tsy nandràra fotsiny ny Rosia Misokatra ny manampahefana — fa nampiditra azy tanaty lisitra mainty ho “fikambanana manelingelina,” angamba fomba henjana indrindra nahafahan'i Kremlin mandràra vondrona, kanefa tsy nilaza azy ho vondrona mpampihorohoro na mahery fihetsika. Tamin'ny filazana ny fampiroboroboana fihetsiketsehana ara-politika ataon'ny Rosia Misokatra, nilaza ny mpampanoa lalàna fa mandrahona ny “foto-dalàmpanorenana” sy ny fiarovam-panjakana” ao Rosia ny fikambanana.
Nilaza i Khodorkovsky sy ireo solontena maromaro ao amin'ny Rosia Misokatra fa mihatra amin'ireo vondrona voasoratra anarana amin'ny fikambanana ao Angletera ihany ny fanapahan-kevitry ny mpampanoa lalàna, fa tsy amin'ny “hetsika ara-tsosialy anaty aterineto Rosia Misokatra,” izay mikarakara fihetsiketsehana, lanonana, sy mitantana fampahalalam-baovao.
Tsy mifandray mihitsy amin'ireo vondrona tafiditra araka ny lalàna ho ao anatin'ity fanapahan-kevitra ity ny [hetsika], hoy i Alexander Solovyov, mpandrindra vaovao ao amin'ny tetikasan'ny Rosia Misokatra tamin'ny tranonkala Meduza. “Miasa ao Rosia araka ny lalàna Federaly faha-82″ momba ny Fikambanam-Bahoaka ny hetsika antserasera, izay midika fa tsy ilaina ho an'ny hetsika ny misoratra anarana ho vondrona ara-dalàna.
Kara-panondro maha-Rosia Misokatra an'i Maria Baronova. Sary: Instagram
Nisisika nilaza tamin'ny Meduza i Maria Baronova, mpandrindra hafa ao amin'ny Rosia Misokatra (ary angamba mpikambana malaza aorian'i Khodorkovsky ao amin'ny hetsika) fa ny hetsiky ny vondrony dia ara-dalàna hatrany, na dia eo aza ny vaovao ankehitriny.
“Hetsika tsy manana andry ara-dalàna izahay- fikambanan'olona izay nanaiky fa te hametraka ny fanjakana Rosiana ho Eoropeana kokoa sy demaokratika kokoa. Ary ankehitriny, miezaka milaza amiko — olom-pirenena ao amin'ny Federasiona Rosiana — ny mpampanoa lalàna fa manelingelina aho, hoy i Baronova.
Tamin'ny fanambarana iray navoaka an-tserasera, nilaza ny Rosia Misokatra fa hafa amin'ny fanamiana Britanika nampidirin'ny mpampanoa lalàna ho anaty lisitra mainty izy. Ny Rosia Misokatra, izay vakianao amin'izao fotoana izao, dia fikambanana Rosiana madiodio, ka noho izany, tsy azo lazaina ho manelingelina,” hoy ny fanambarana.
Manantena ny Rosia Misokatra fa mihatra irery ihany amin'ireo “ONG vahiny sy iraisampirenena” ny lalàna iadiana amin'ireo “fikambanana manelingelina”. Mety hoe tsy ampy izany mba hanavotana ny hetsika, noho izy mihitatra any amin'ny rantsana Rosiana rehetra.
Miha-sarotra ny raharaha eto, satria miditra ny resa-bola. Mandoa vola amin'ny mpiasa ny Rosia Misokatra (anisan'izany i Solovyov sy Baronova), ary ny loharanom-bolan'ny hetsika dia azo antoka fa i Mikhail Khodorkovsky, izay niala tao Rosia raha vao tafavoaka ny fonja tamin'ny famelan-keloky ny filoha tamin'ny taona 2013. Rehefa nigadra nandritra ny folo taona, mbola tombanana ho eo amin'ny 500 tapitrisa dolara eo ny vola madiodio an'i Khodorkovsky.
Raha “fikambanana Rosiana madiodio” ny Rosia Misokatra, ahoana no fomba hamindrany ny volan'i Khodorkovsky any amin'ireo mpiasa mandray vola ao amin'ny hetsika? Raha avy any ivelan'i Rosia izany vola izany, dia tsy marina ny filazan'ny hetsika fa Rosiana madiodio izy. Raha mandalo vondrona voararàn'ny mpampanoa lalàna araka ny lalàna ny loharanom-bola, dia mety ho voampanga amin'ny fiarahamiasa amin'ny “fikambanana manelingelina” ny mpiasan'ny Rosia Misokatra – heloka izay azo saziana hatramin'ny enin-taona an-tranomaizina.
Voaràra tsy mahazo mifampiraharaha amin'ireo “manelingelina” ihany koa ny banky Rosiana sy ny ivon-toerana ara-bola, izay midika fa mety tsy ho afaka handoa karama ho an'ny mpiasany, ny hofan'ny toeram-pivoriana, ny pirinty amin'ny afisiny sns, intsony ny Rosia Misokatra atsy ho atsy — na dia miaro tena mafy eo anoloan'ny gazety aza.
Tsy nety nilaza tamin'ny Meduza mikasika ny famatsiam-bolan'ny hetsika i Baronova. “Tsy hamoaka izany karazam-baovao izany amin'ny fanjakana tsirefesimandidy izahay”, hoy izy nanazava, sy nisisika nilaza fa tsy misy ny tokony atahoran'ny ekipan'ny hetsika.
Amin'ny Asabotsy 29 Aprily, mikasa hikarakara fihetsiketsehana manerana ny firenena ny Rosia Misokatra ho fanoherana ny firotsahan'i Vladimir Potinina hofidiana filoham-pirenena faninefany, izay antenaina tanteraka fa mbola hirotsaka hofidiana amin'ny volana Martsa ho avy izao. Nahavita nahazo fahazoan-dalàna tao amin'ny tanàna lehibe miisa 11 ny vondrona, saingy nandrahona kosa ireo manampahefana tao amin'ny tanàna sivy (anisan'izany i Moskoa sy St-Petersburg), fa handray fepetra ny polisy raha misisika manao fihetsiketsehana ny Rosia Misokatra.
Ary talohan'ny nivoahan'ny resaka “fikambanana manelingelina” izany.
Makedonia 22 ora izay